2.1 Fahasamihafan'ireo tenim-paritra
4.1 Indran-teny tamin'ny fiteny javaney sy maley
Ny endriky ny teny malagasy dia tsy tahaka ireo fiteny ao Afrika satria io fiteny io dia ao amin'ny vondrona malaiô-pôlineziana, sampan'ny vondrona aostrôneziana. Ny fiavian'ny teny malagasy dia fantatr'ireo mpandini-piteny hatry ny taonjato faha-19. Ny teny malagasy dia mitovy vondrom-piteny amin'ny fiteny baritô avy amin'ny faritany atsimo atsinanan'ny Nosy Bôrneô. Betsaka ny fitovizan'ny teny malagasy amin'ny fiteny ma'aniany, fiteny tenenina eo amin'ny faritry ny renirano Baritô, ao atsimon'i Bôrneô. Lazaina fa mponina aotrôneziana avy amin'ny tamba-nosy maley nandalo tany Bôrneô no nipetraka teto Madagasikara, na dia tsy fantatra aza ny anton'io fifindrana io. Taonjato maro taty aoriana, nifangaro tamin'ny Arabo sy ny Masombika (Afrikana avy amin'ny tontolo soahily) ny mponina aostrôneziana.
Ao amin'ny teny malagasy dia misy indran-teny avy amin'ny fiteny arabo ary koa avy amin'ny teny soahily. Ny haisoratra malagasy dia efa nanomboka tamin'ny taonjato faha sivy ambin'ny folo. Tamin'ny Frantsay tonga tao Fort-Dauphin tamin'ny taonjato faha-17, nahita sotatra tamin'ny sorabe izy ireo. Ny soratra voalohany tamin'ny abidy latina dia ny rakibolana malagasy-holandey nosoratana tamin'ny fanombohan'ny taonjato faha 17 navoakan'i Gabriel Ferrand voalohany tamin'ny 1908. Ny sorabe dia soratra mety nampidirina eto Madagasikara tamin'ny taonjato faha-15. I Radama I, mpanjaka nahay mamaky teny sy manoratra tao amin'ny Fanjakana Merina, dia nametra ny litera ampiasaina ao amin'ny abidy malagasy avy amin'ny abidy latina mbola ampiasaintsika amin'izao fotoana izao; saingy ny fitsipi-panoratana ampiasaina fotsiny no niova. Nikasa hanangana fiangonana sy trano sekoly hianarana abidy miaraka amin'ireo misionera protestanta avy ao amin'ny London Missionary Society i Radama I.
Ny boky voalohany natonta printy tamin'ny teny malagasy soratana amin'ny abidy vaovao, dia ny Baiboly, nadikan'ny misionera kristiana britanika tamin'ny taona 1835 niasa tao Imerina. Ny rakibolana vita printy voalohany dia ny rakibolana malagasy-frantsay nataon'i Étienne de Flacourt.
Rehefa jerena amin'ny lafiny fandiniham-piteny ny teny malagasy, dia misy endri-piteny malagasy isam-paritra maromaro fa mitovitovy. Samy endriky ny fiteny malagasy izy ireo fa tsy fiteny mahaleo tena, dia ireto izany:
Any Madagasikara dia misy ny malagasy ofisialy. Miasa eran'ny nosy sy ampiasainy amin' ny raharaham-panjakana sy ny gazety ary ny fahitalavitra.
Ao amin' ny vondrona atsinanan' ny zana-tsampan' ny fiteny baritô ireo fiteny ireo. Any Indônezia daholo ny vahoaka miteny baritô hafa, afa-tsy ny Malagasy miteny malagasy. Noho izany, dia avy any Indônezia ny teny malagasy fa tsy niforona teto Madagasikara. Tamin' ny taonjato fahefatra vao nahitana olona tao Madagasikara, kanefa tany Afrika, 400 km miala avy eo, dia efa nisy olona hatramin' ny 2 000 000 taona lasa.
Hita eo ambany ny tabilao maneho ny lanjan'isan'ny fahasamihafan'ny tenim-paritra.
Indran-teny tamin'ny fiteny javaney sy maleyHanova
Betsaka ny indran-teny amin'ny teny malagasy nindramina tamin'ny teny vahiny. Ao ny fiteny maley ary ao koa ny fiteny javaney taloha; anisan'ireo teny ireo dia ny teny hoe trozona, iray amin'ny teny maley hoe duyung; ny horita avy amin'ny teny hoe gurita; ny fano avy amin'ny teny hoe penyu, ny hara avy amin'ny teny malay hoe karah, ny fanohara (karazan-tsokatra) avy amin'ny teny malay hoe penyu karah; rivotra avy amin'ny fiteny malay hoe ribut midika "rivomahery" na "rivodoza"; tanjona avy amin'ny fiteny malay hoe tanjung; harana avy amin'ny teny malay hoe karang; sambo sy nosy avy amin'ny fiteny javaney hoe sāmvaw sy nusa, sns.
Indran-teny avy amin'ny fiteny sanskrityHanova
Ny indran-teny avy amin'ny teny sanskrity dia mikasina ny isa sy ny kalandrie. Azo atao ohatra izao ny teny hoe tantara avy amin'ny teny sanskrity hoe tantra midika "teôria"; torak'izany koa ny teny hoe hetsy (100 000) izay avy amin'ny teny malay hoe keti nindramina tamin'ny teny sanskrity hoe koṭi midika "folo tapitrisa".
Ireo teny avy amin'ny fiteny sanskrity moa dia nindramin'ny fiteny malagasy talohan'ny nahatongavan'ny Malagasy teto Madagasikara. Ka noho izany izy ireo dia niharan'ny fiovana ara-drafipeo, ka tsy fantatra avy hatrany intsony ny fiaviany raha tsy dinihana amin'ny alalan'ny haifiteny mampitaha (linguistique comparative). 
Indran-teny avy amin'ny fiteny hafaHanova
Ankehitriny ny teny malagasy dia nindran-teny tamin'ny teny arabo (voambolana mikasika ny fanandroana), ny teny soahily (voambolana mikasika ny biby ompiana toy ny teny hoe ondry na akoho) ary tamin'ny teny frantsay sy anglisy ho an'ny voambolana mikasika ny fitaovana ampiasaina amin'izao fotoana izao toy ny solosaina azo tenenina koa hoe ordinatera na kompiotera. Ao koa ny anaran'ny karazan-java-kohanina toy ny pizza, ny makaraona sns...
Nanana ny fianjadiany ihany koa ny fiteny arabo, indrindraindrindra amin'ny voambolana ampiasaina amin'ny fanandroana ary ireo vondron-kintan'ny zôdiaka: Alahamady, Adaoro, Asorotany, sns... ; ary koa amin'ny lafiny tetiandro, amin'ny fampiasana ireo teny arabo ho fiantsoana ny anaran'andron'ny herinandro: Alatsinainy, Talata, Alarobia, sns..
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_malagasy&oldid=999796"
Dernière modification le 3 Janoary 2021, à 14:21
Voaova farany tamin'ny 3 Janoary 2021 amin'ny 14:21 ity pejy ity.